Barrack Water Festival earlybird tickets အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Barrack Water Festival earlybird tickets
ရောင်းချသူ: Lee Wan Choon
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : ၃၆ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်: 19 (+1)
ဒီနေ့Barrack Water Festival earlybird tickets တွေ စ၀ယ်လို့ရပြီနော်...
Early bird ဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီလကုန်ထိပဲ ဒီဈေးနဲ့ ရမှာနော်...
လက်မှတ်ဝယ်ချင်တဲ့ Barrack ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ လက်မှတ်ဝယ်လို့ ရပြီနော်
All days - 45000 ks
3 စောင်ယူ delivery free အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်။
နေရာကလည်း ပြည်လမ်းမှာနော်... ပြီးတော့ Earlybird ticket က အကန့် အသတ်နဲ့ မို့မြန်မြန်ဝယ်ထားကြနော်.
တစ်ရက်ချင်းစီ လက်မှတ်ဈေးတွေကိုလည်း Earlybird sales ပြီးရင် ကြေငြာ ပေးမှာနော်...
VVIP မှဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဆက်ပြီး စုံစမ်းလို့ရ တယ်နော်.
COC Game Account
Clash of Clans(COC)
အမည်: Barrack Water Festival earlybird tickets